CPR | | တရုတ်နိုင်ငံတွင် Sensor & Sensor တူရိယာထုတ်လုပ်သူထုတ်လုပ်သူ
Miniature compression ဝန်ဆဲလ်
တင်းမာမှု 2-ends ဆဲလ်ဝန်
သေးသေးလေး 2- စွန်း
S-Type တင်းမာမှု 2- စွန်း
micro strain အာရုံခံကိရိယာ
CPR အာရုံခံကိရိယာများ /0င်သောဆဲလ်များ / force အာရုံခံကိရိယာများ / trackque transducer / pressure systems / components / love systems / love cell systems
ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး 2004 ကနေ origined
CPR - သင်ယုံကြည်စိတ်ချရနိုငျသညျ!
ပံ့ပိုးမှု OEM& လိမ္မော်ရောင် | ကုန်သွင်းသူ& ထုတ်လုပ်သူ။
ရှန်ကျန်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအာရုံခံ&amp; တူရိယာ, LTD ။
2004 ခုနှစ်တွင်တရုတ်အတွက်ရေရှည်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအတွက်ဂျပန် NMB နေဖြင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်။
2007 ခုနှစ်တွင်ဖိအားအာရုံခံကိရိယာများအပေါ် Freescale (ယခင် Motorola) ၏အထူးဖြန့်ဖြူးဖြစ်လာခဲ့သည်။
2014 ခုနှစ်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုးချဲ့အင်အားသုံးစမ်းသပ်မှုစနစ်ကတစ်အမျိုးသားရေးမူပိုင်ခွင့်ရရှိခဲ့သည်။
2017 ခုနှစ်, နည်းပညာတက္ကသိုလ် Harbin Institute မှအတူမဟာဗျူဟာမြောက်မိတ်ဖက်ဖြစ်လာခဲ့သည်။
2018 ခုနှစ်တွင်အမျိုးသားအဆင့်မြင့်နည်းပညာလုပ်ငန်းဖြစ်လာခဲ့သည်နှင့်အသစ်စွမ်းအင်အာရုံခံကိရိယာများနှင့် software အမျိုးမျိုးကိုတီထွင်, တစ်ချိန်တည်းမှာတိုးချဲ့အင်အားနှင့်နေရာရွှေ့ပြောင်းခြင်းစောင့်ကြည့်နိုင်သည့်တစ်ထုတ်ကုန်အသစ်စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
2019 ခုနှစ်တွင်တိုးချဲ့အင်အားသုံးစမ်းသပ်သည့်စနစ်အောင်မြင်စွာစွမ်းအင်သစ်ယာဉ်များ၏လယ်ပြင်ကို၎င်း, အသစ်တီထွင် cpr ထဲသို့ဝင်အာရုံခံကိရိယာထုတ်ကုန်အင်အားစုများနှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်အင်အားသုံးစမ်းသပ်မှုစနစ်များကိုဖြန့်ဝေ installed နေကြသည်။
CPR အာရုံခံကိရိယာ FCC သည် / EMC / ROHS လက်မှတ်များလွန်ထားပြီး
ရှန်ကျန်းအာရုံခံခြင်းနှင့် Intelligent ရှိ Instrumentation စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းမှအတွင်းဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး
အကောင်းဆုံး CPr163 250 / 500kg 1/2 / 5/5/10/10/50 / 100t compression သည်ထရပ်ကားပလက်ဖောင်းပေးသွင်းသူအတွက် Cell force Sensor
ထရပ်ကားစကေး, ပလက်ဖောင်းစကေး, ဘင်နှင့်အခြားအလေးချိန်စနစ်သည်။optional ကိုမြင့်မားသော emperated အမျိုးအစား, optional built-in အသံချဲ့စက်အမျိုးအစား။·ချုံ့ဝန်ဆဲလ်· Allow သံမဏိဆောက်လုပ်ရေး· EMC / FCC / ROHS အတည်ပြုခဲ့သည်·မြင့်မားသောတိကျမှန်ကန်မှုကို·မြင့်မားသောတည်ငြိမ်မှုထည့်သွင်းရန်လွယ်ကူသည်·နီကယ် - plated ကုသမှုအားဖြင့်ချေးငှားခြင်းမှကာကွယ်ရန်· (0-5v, 0-10v, 4-201) အတွက်စိတ်ကြိုက် (0-5v, 0-120V, 4-20mA) အတွင်းပိုင်းချဲ့စက် / ရူပီး·ထရပ်ကားစကေး, ပလက်ဖောင်းစကေး, ဘင်နှင့်အခြားအလေးချိန်စနစ်အတွက်သင့်တော်သည်စွမ်းရည် 250 / 500kg 1/5/5/10/50 / 100t
အကောင်းဆုံး CPR702-S07 သေးငယ်သောသေးငယ်သော compression compression column သည် Press Machine Supply အတွက် Cell Force Sensor
အသေးစားအင်အားစု transducerMicro Sensor, မိုဘိုင်းဖုန်းတပ်ဆင်ခြင်း, ဖိအားများထိန်းသိမ်းခြင်းကိရိယာများ, မိုဘိုင်းဖုန်းစည်းဝေးပွဲ, Keystroke သည်တိုင်းတာခြင်း, ဖိအားစစ်ဆေးခြင်း,·တင်းမာမှုနှင့်ချုံ့ခြင်းနှင့်တပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူသည်။ အားလုံးသံမဏိဖွဲ့စည်းပုံမှာ။·တပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူပြီးသေးငယ်သည့်အရွယ်အစား·နီကယ် - plated ကုသမှုအားဖြင့်ချေးငှားခြင်းမှကာကွယ်ရန်·ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်တိုင်းတာခြင်းအတွက်အောက်ခြေ4တွင်းဖြင့် flange နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည်·အသေးစားအရွယ်အစား, ကျယ်ပြန့်သောအကွာအဝေးရှိနေရာများနှင့်အကန့်အသတ်ရှိသောနေရာများနှင့် extrication အဆင်းသောပစ္စည်းကိရိယာများကို0န်ဆောင်မှုပေးသည်။စမ်းသပ်ခြင်းစက်, သေးငယ်သောတင်းမာမှုများနှင့်ဖိအားစစ်ဆေးခြင်းကိရိယာများအတွက်သင့်တော်သော,စွမ်းရည် - 200kg / 500 ကီလိုဂရမ်, 1/2 / 5t, 20T, 20t, 30t, 30t, 50t, 50t
ဖိအားစီးဆင်းမှုအဆင့် interface providate for flow level level ကိုပေးသွင်းသူအတွက်အကောင်းဆုံး CPRP1000C Differential ဖိအားအာရုံခံကိရိယာ
တစ် ဦး က differential ဖိအားအာရုံခံကိရိယာသည်၎င်း၏ port နှစ်ခုဖြင့်ဖိအားကိုပိုမိုလုပ်ဆောင်သည်အရည်သို့မဟုတ်ဓာတ်ငွေ့၏ဖိအား, စီးဆင်းမှု, အဆင့်, interface နှင့်သိပ်သည်းဆကိုတိုင်းတာပါဤစနစ်များတွင်၎င်းသည်အရည်သို့မဟုတ်ဓာတ်ငွေ့၏ဖိအား, စီးဆင်းမှု, အဆင့်, interface နှင့် interface နှင့် density တို့ကိုအလွယ်တကူတိုင်းတာနိုင်သည်။ ဤအာရုံခံကိရိယာများ၏နောက်ထပ်အရေးကြီးသောအဆို့ရှင်များသည်အဆို့ရှင်များကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည်။ ဖိအားကိုတိုင်းတာခြင်းနှင့်ရလဒ်နံပါတ်ကိုတွက်ချက်ခြင်းအားဖြင့်တိုးတက်မှုပိတ်ဆို့ခြင်းတစ်ခုခုရှိလျှင်အလွယ်တကူပြနိုင်သည်။ စီးဆင်းမှု၏အဆုံးတွင်အဆို့ရှင်၏ဖိအား (သို့မဟုတ်အဆို့ရှင်၏အစအ ဦး) ထက်ပိုမိုမြင့်မားလျှင်, ထို့နောက်စောင့်ရှောက်ရန်လိုအပ်သည့်ပိတ်ဆို့မှုများရှိကြောင်းအတည်ပြုနိုင်သည်။ကွဲပြားခြားနားသောဖိအားအာရုံခံကိရိယာများနှင့် static tests sensors များအကြားကွာခြားချက်မှာ static type သည် picks picks pipes များတပ်ဆင်ထားသည့် ports နှစ်ခု ports နှစ်ခုတပ်ဆင်ထားသည့်ဖိအားကိုတိုင်းတာရန် port type တစ်ခုတည်းကိုသာအသုံးပြုသည်။ကွဲပြားသောဖိအားအာရုံခံကိရိယာများလျှောက်လွှာဤဖိအားအာရုံခံကိရိယာများကိုအမျိုးမျိုးသော application အမျိုးမျိုးတွင်အသုံးပြုသည်။ ဤအာရုံခံကိရိယာများကိုစက်မှုပတ်ဝန်းကျင်တွင်တွေ့ရှိနိုင်သည်။ ဓာတ်ငွေ့သို့မဟုတ်အရည်၏ဖိအားကိုတိုင်းတာရန်လိုအပ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ဓာတ်ငွေ့များသို့မဟုတ်အရည်များကိုအအေးသို့မဟုတ်အအေးပေးခြင်းဖြင့်အလုပ်လုပ်သောစနစ်များတွင်ဤအာရုံခံကိရိယာများအသုံးပြုခြင်းသည်များသောအားဖြင့်လိုအပ်သည်။ Different Allow Protector Sensor များကို Fire Protecturment Systems တွင်လည်း၎င်းတို့၏ဖြန်းလက်တစ်ဖက်အတွင်း၌လည်းတွေ့နိုင်သည်။ တံခါးပိတ်တစ်ခုရှိအရည်ပမာဏကိုတိုင်းတာရန်လိုအပ်သည့်အခါ၎င်းတို့သည်အသုံးဝင်သည်။ ဖိအား, ဆွဲငင်အားနှင့်အရည်သိပ်သည်းဆသည်အရည်ပမာဏကိုတိုင်းတာရန် (အရည်ကော်လံ၏အမြင့်) ကိုတိုင်းတာရန်ကူညီနိုင်သည်။ ၎င်းသည်အပူချိန်အပြောင်းအလဲသည်အရည်၏သိပ်သည်းဆကိုမပြောင်းလဲသည့်အခါအခြေအနေများအတွက်သာဖြစ်သည်။
အကောင်းဆုံး CPR503-88 Thru အပေါက်ပေါက်အပေါက်များ Thru Holder Work Type Load Force Gym Plose Gym Horkout Equipout Equipout Company အတွက်0emင်
CPR503-88 Thru Hole Hasher Type Load စျေးကွက်အတွက်အလားတူထုတ်ကုန်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် The Force Gym Hormsher Type Load စျေးကွက်တွင်အလားတူထုတ်ကုန်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကအရည်အသွေးမြင့်, CPR သည်အတိတ်ကထုတ်ကုန်များ၏ချို့ယွင်းချက်များကိုအကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြထားပြီးစဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်စေသည်။ CPRF503-88 throuy Thru Hasher Hasher Type Load Comment အတွက် Force Gym Holdout ပစ္စည်းကိရိယာများအတွက်သတ်မှတ်ချက်များကိုသင်၏လိုအပ်ချက်အရစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်သည်။·မျိုးသုဉ်းပိုးပါ0င်ဆဲလ်·သံမဏိဆောက်လုပ်ရေး· EMC / FCC / ROHS အတည်ပြုခဲ့သည်·မြင့်မားသောတိကျမှန်ကန်မှုကို·မြင့်မားသောတည်ငြိမ်မှုထည့်သွင်းရန်လွယ်ကူသည်·နီကယ် - plated ကုသမှုအားဖြင့်ချေးငှားခြင်းမှကာကွယ်ရန်· bolt တင်းကျပ်စွာတင်းကျပ်သောအင်အားစုများအတွက်သင့်လျော်သည်, ဝက်အူသော့ခလောက်နှင့်လှံတံများ,စွမ်းဆောင်ရည် - 20 ကီလိုဂရမ်, 30 ကီလိုဂရမ်, 50 ကီလိုဂရမ်, 200kg, 200kg, 500 ကီလိုဂရမ်,
CPR ထံမှဝန်ဆဲလ်: သင့်လျှောက်လွှာများအတွက်အမြဲတမ်းညာဘက်ဖြေရှင်းချက်
CPR အာရုံခံကိရိယာ high-tech ကိုနိုင်ငံတကာအမှတ်တံဆိပ်ပေါင်းစပ် R ကို 2004 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့& : D, ထုတ်လုပ်မှု& ရောင်းမည်။ ကျနော်တို့စမ်းသပ်မှုများနှင့်အတွေ့အကြုံထက်ပို 15 နှစ်ကိုကိုယ်စားပြုကြောင်းတိုင်းတာခြင်းအာရုံခံကိရိယာတစ်ခုကွဲပြားခြားနားအကွာအဝေးကိုဆက်ကပ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကျယ်ပြန့်အင်ဂျင်နီယာနှင့်ထုတ်လုပ်ကျွမ်းကျင်မှု Load ဆဲလ်, တင်းမာမှုပြီးတော့ Compression ကို Load ဆဲလ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည့်စုံလိုင်းများ, ဖိအားအာရုံခံ, အမြင့်အပူချိန်ဖိအားအာရုံခံကိရိယာ, torque အာရုံခံ, Displacement Transducers, ဒစ်ဂျစ်တယ် Indicator သည်ထိုအ amplification, အလေးချိန် transmitter စတာတွေအတွက်ထင်ရှား၏
စုံလင်သောမထိုက်မတန်အာရုံခံရှာဖွေတာကိုအလွန်လိုချင်သောစိတ်? CPRအာရုံခံကိရိယာ သင့်ရဲ့တစ်ဦးချင်းလိုအပ်ချက်ဖြည့်ဆည်းဖို့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖြေရှင်းချက်ပေးနိုင်ဘူး။
တရုတ်စက်ရုံ & အတွေ့အကြုံရှိဝန်ထမ်း
client ကို customzation Accept
ခိုင်မာတဲ့ & ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပညာရှင်များအသင်း
အာရုံခံကိရိယာတပ်ဆင်မှုအတွက် friendly အင်ဂျင်နီယာ
ဆက်သွယ်ရန်ကျွန်တော်တို့ကို CPR ပူဇော်နိုင်ပါတယ်ဘယ်အရာကိုမြင်မှယနေ့။ မည်သည့်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်စီးပွားဖြစ်မေးခွန်းများကိုမေးရန်အခမဲ့ခံစားရသည်။